Jack tavoahangy, Trolley Jack, Garage Jack, Jack Stand - Jiaye
Haiyan Jiaye Machinery Tools Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2003. Matihanina amin'ny famokarana sy fivarotana fitaovana fitrandrahana isan-karazany isika: jacks hidraulika, fitaovana fikojakojana fiara, fitaovana fanamboarana môtô ary fitaovana ara-motera hafa. Nahazo ny kaomisiona momba ny kalitao ISO9001 izahay ary ny ankamaroan'ny vokatrao dia manana taratasy fanamarinana CE. Ny vokatra avy any amintsika dia aondrana manerana izao tontolo izao. Nandritra ny taona fandrosoana, lasa fikarohana, fikarohana, famokarana ary varotra miaraka any ivelany isika.
Ny finoan'ny orinasa dia "kalitao voalohany, fanavaozana ara-teknika, serivisy tsara ary serivisy haingana". Ny tanjonay dia ny hamorona marika ambony, vokatra avo lenta ary serivisy kilasy ambony eo amin'ireo mpifaninana.
Jack BJ0201 mahazatra
Jereo ny tenanao
Afaka milaza aminao be fotsiny ny teny. Jereo ity sarin'ny saripika ity mba hahitanao ny Haas anao isaky ny zoro.
Ataovy bebe kokoa
Avy amin'ny fanaraha-maso be mpampiasa indrindra amin'ny indostria, mankany amin'ny rafitra vaovao Wireless Intuitive Probing System (WIPS), mankany amin'ny fisafidianana karazana spindles sy mpanamboatra fitaovana izahay, avelanay manamboatra ny milina ho anao izy. Rehefa dinihina tokoa, fantatrao izay ilainao tsara kokoa noho ny olona. Fantaro bebe kokoa ny zava-drehetra atolotry ny Haas.
Diniho ny endri-javatra
Amboary ny Masinina Mofonao
Vonona ny hamorona milina mitsangana Haas vaovao anao? Andao hahita ny milina mety ho an'ny fivarotanao, ary ataovy azy manokana amin'ny fampidirana ireo safidy sy endri-javatra miasa ho anao. MISY AZONAO
hydraulic Garage Jack 3ton , Fitaovana otomotika, 3ton hydraulic Garage Jack , hydraulic Garage Jack , fanamboarana Tools , Car Creeper ,